2019-07-05 | Job Vacancy in Myanmar
2019-07-05 20:35:02 ,ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်ခေါ်ခြင်း ဖြစ…
ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့် (၁၀.၀၇.၂၀၁၉)နောက်ဆုံးထား ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်…
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-07-05 by admin.
2019-07-05 20:34:48 ,***အလုပ်ရှာဖွေနေပါသလား? Ruby …
1.စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ Food & Beverage Company ကြီးအတွက် (1) Accountant F(3)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000 – ဘွဲ့ရ၊ LCCI Level III(UK)အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ် – အလုပ်ချိန်(၉း၃၀)မှ ညနေ(၅း၃၀)ထိ – တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ (2) Cashier F(3)Posts
– လစာ 170,000 – 200,000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – အသက်(၃၀)အောက် Computer Word,Excel – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၆း၃၀)နာရီ
– တစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ် (3) Driver M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 300,000 – အထက်တန်း၊လိုင်စင်အနက်၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – လိုင်စင်အနက်၊စားစာရိတ်စီစဉ်ပေး၊ – အလုပ်ချိန်-တစ်နေ့(၈)နာရီ (4) Storekeeper M(3)Posts
– လစာ 200,000 – 250,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၂)နှစ် – အသက်(၃၀)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၆း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (8.7.2019)တနင်္လာနေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
2.တ/ဥမြို့နယ်ရှိ Decoration Company ကြီးအတွက် (1) Sale & Marketing F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၃၅)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ – (9.7.2019)အင်္ဂါနေ့ နေ့လယ်(၁)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
3.အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာဆေးမျိုးရောင်းယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွက် (1) Sale Girl F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊ အတွေ့အကြုံမလို – အသက်(၂၅)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ – (8.7.2019)တနင်္လာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
4. အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ Printing Service Company ကြီးအတွက် (1) Photoshop M(5)Posts
– လစာ 170,000 – 250,000 – ဆယ်တန်း၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၈-၃၅)ကြား – More Information – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၈)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတစ်လ(၂)ရက်ပိတ်သည်။ – (9.7.2019)အင်္ဂါနေ့ နေ့လယ်(၁၁)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
4. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးအတွက် (1) Warehouse Manager M(2)Posts
– လစာ 400,000 – 600,000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ် – အသက်(၃၀-၄၅)အတွင်း – Computer Word,Excel,Internet သုံးနိူင်သူ
(2) Shop Manager M/F(2)Posts
– လစာ 4000,000 – 500,000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၃)နှစ် – အသက်(၃၀)အထက် – Minimart/Convenice Store တွင်လုပ်ဖူးသူဦးစားပေး – More Information – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈း၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (6.7.2019)စနေနေ့ မှတစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
5. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ Furniture Company ကြီးအတွက် (1) QS Engineer M/F(3)Posts
– လစာ 300,000 – 400,000 – ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၃၅)အောက် Auto CAD 2D/3D – More Information – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (6.7.2019)စနေနေ့ ညနေ(၃)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
6.တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရေခဲမုန့်လုပ်ငန်းကြီးအတွက် (1) Helper M/F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၃၅)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတစ်ပတ်(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (8.7.2019)တနင်္လာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
7.ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ IT Company ကြီးအတွက် (1) Tele Marketing F(5)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊အတွေ့အကြုံ(၆)လ – အသက်(၂၅)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅း၃၀)နာရီ
– ပိတ်ရက်းတနင်္ဂနွေ(၁)ရက်ပိတ်သည်။ – (8.7.2019)တနင်္လာနေ့ မနက်(၁၀)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
8. တ/ဥမြို့နယ်ရှိ ဆေးကုမ္ပဏီကြီးအတွက် (1) Sale & Marketing M/F(2)Posts
– လစာ 150,000 – 200,000+++++ – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံ(၁)နှစ် – အသက်(၃၀)အောက် – More Information – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ
9. လသာမြို့နယ်ရှိ Baby Shop ကြီးအတွက် (1)Sale Staff F(3)Posts
– လစာ 150,000 – 180,000 – ဆယ်တန်းအောင်၊ဘွဲ့ရ၊အတွေ့အကြုံရှိ/မရှိ – အသက်(၃၅)အောက် – အလုပ်ချိန်းမနက်(၇း၄၅)နာရီမှ ညနေ(၆း၃၀)နာရီထိ – More Information – အလုပ်ချိန်းမနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၆း၃၀)နာရီထိ
– ပိတ်ရက်းတစ်လ(၂)ရက်ပိတ်သည်။ – (6.7.2019)သောကြာနေ့ နေ့လယ်(၃)နာရီအင်တာဗျူးရှိပါသည်။
2019-07-05 20:33:56 ,Dear Connections,
2019-07-05 20:33:22 ,We are looking for experienced…
We are looking for experienced waiters and waitresses with good English language skills to join our team. We offer competitive salaries and benefits. Please get in touch with us if you are interested.
2019-07-05 20:33:19 ,Interview ရှိသည် ။
Interview ရှိသည် ။
2019-07-05 20:32:30 ,၈ရက်နေ့အင်တာဗျူး.cvကြိုတင်ပါလူ…
နာမည်ပြီးSkin Care Companyတွင်👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄
အခြေခံလစာ ၁၅၀၀၀၀ 💶💷💵နှင့်ခံစားခွင့်
2019-07-05 20:30:53 ,လှိုင် မြို့နယ် ပါရမီလမ်းမပေါ်ရှ…
လှိုင် မြို့နယ် ပါရမီလမ်းမပေါ်ရှိ အဆင့်မြင့်စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
Waiter/ Waitress (5) posts
-အသက် ( 18 မှ 25) အတွင်း
အ​ဖျော်​ဆရာ . Male / Female (2) Posts
-သစ်သီးမျိူးစုံ frush juices, coffee စသည့်ဖျော်ရည်မျိူးစုံဖျော်တတ်ရမည်။
*** ​နေ့ စားငြိမ်းလဲ ​နေနိုင်​ပါသည်​။
Ph.viber no. 09269792095
2019-07-05 19:22:28 ,မင်္ဂလာပါ.. ကျနော် That Right Ro…
🔹မင်္ဂလာပါ.. ကျနော် That Right Road Agency ကပါခင်ဗျ။🔹
1. Sale & Marketing ( Cosmetics (or) FMCG ပိုင်းလုပ်ကိုင်ဖူးသူ)
– ဘွဲ့ရ (or) ကျောင်းလုံးဝဆက်မတက်သူ
– အသက် (၃၀) နှစ်အောက်
– Sale & Marketing ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်
* Sale & Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိသူများသာ လျှောက်ထားပေးပါရန်*
– Cosmetics (or) FMCG ပိုင်းများတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ
– အလုပ်ချိန်(9:00am to ၆:00pm)
– Sunday+Public Holiday Off
– မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်ရှိ စားသောက်ကုန်ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
______ ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ______
09 890 280 040, 09 972 080 220 ☎️သို့အချိန်မရွေးဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။
💌 Viber ဖြင့် CV ပေးပို့လျှောက်ထားလိုပါက – 09 890 280 040
📧 Email – thatrightroadagency@gmail.com သို့ CV Form ပေးပို့လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
😊 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. သာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။🔸
2019-07-05 19:21:44 ,Admin Please !
Admin Please !
2019-07-05 19:20:55 ,Yangon (YanKin Tsp) Business M…
Yangon (YanKin Tsp) Business Management Co.,ltd
👨‍💼 Chief M&E Engineer 👨‍💼 M(1) -salary (1,000,000~1,200,000 )MMK -BE(Mechanical/Electrical/Mechantronic/Instrumentation) -must have at lease5years experience -Good at English -Strong Knowledge for preventative Maintenance and Corrective Maintenance Work. -Strong Leadership
🔥To apply, Phone -09951040844 Viber. -09683998947 Mail. -mshrmconsulting22@gmail.com